हिरोइनहरु किन गो’प्य अं’गमा खोप्छन् ट्या टु ? – News Nepali Dainik
हिरोइनहरु किन गो’प्य अं’गमा खोप्छन् ट्या टु ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: १०:४५:४३
काठमाडौं / ‘स्त’न’को तल्लो भागमा ट्या’टु खोपेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अभिनेत्री साम्राज्ञलक्ष्मी शाह केही समय वि’वादमा तानिएकी थिइन् । उनको उक्त तस्बिर ट्या’टु कलाकारले सार्वजनिक गरिदिएको भन्दै केही समय सामाजिक सञ्जालमा आ’क्रोशित पनि भइन्।
प्रेम लगायतका विभिन्न वि’वादमा तानिने साम्राज्ञीको सार्वजनिक भएको त्यो तस्बिरले अधिक चर्चा पाएको थियो । नेपाली फिल्ममा अं’ग प्रदर्शनको क्रम जति च’र्को छ त्यति नै त्यस्ता अं’गमा ट्या’टु खोप्ने क्रम बढेको छ ।
ढाडदेखि क’म्मर र नीजि अं’गसम्म नै ट्या’टु खोप्ने अर्की अभिनेत्री हुन् प्रियंका कार्की । उनको हातदेखि खुट्टालगायतमा पनि ट्या’टु खोपिएका छन् । ट्या’टु एउटा रहर भए पनि अभिनेत्री ह’कमा भने अं’ग प्रदर्शन गर्ने मे’लोमेसो मात्र बनेको छ ।
एक जना कलाकार भन्छन्,‘अभिनयमा लागेका कतिपयले कथाले नमागे पनि ट्या’टु खोपेका छन् यो उनीहरुको नीजि मा’मला हुन सक्छ तर पर्दामा आएपछि, मिडियामा आएपछि चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविक हो ।
५ दशकको उमेरतिर लागेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले क्लि’भेजमा ट्या’टु खोपेकी छन् । उनको ट्या’टु स्पष्ट देखिने गरेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा राजनीतिक नै विभिन्न ठाउँमा जाँदा उनी खु’लेको पहिरन लगाउँछिन्, ट्या’टु प्रस्ट देखिन्छ ।
क्लि’भेज देखाउँदा सुन्दरताको प्रतीक नै देखाएको ठान्ने अभिनेत्रीहरूले जति अं’ग प्रदर्शनको क्रम बढेको छ, त्यति नै गो’प्य ठाउँमा ट्या’टु खोप्न थालेका छन् । कहिलेकाहीँ यस्तै ट्या’टु खोपेको, देखाएकोलगायतका वि’वादका कारण पनि उनीहरु मिडियामा छाइरहने गरेका छन्
Last Updated on: March 9th, 2021 at 10:45 am